सुस्ताको झोलुङ्गे पुल निर्माणले अझै गति लिन सकेन | eAdarsha.com
सुस्ताको झोलुङ्गे पुल निर्माणले अझै गति लिन सकेन
नवलपरासी, २२ जेठ । जब सुस्ताको नारायणी नदीमा चारबर्ष अघि नेपाली भूमिसँग सोझै जोड्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि ठेक्का लाग्यो त्यति बेला त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा खुसीको सीमा थिएन ।
लाग्थ्यो उनीहरुलाई एउटा युद्ध जितेका छौं तर, त्यो खुसीको सपना विपनामा परिणत हुने दिन नजिकिंदासम्म पनि पुल निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सुस्ताका बासिन्दाको सपनामा तुषारोपात लागेको छ । सरकारले ठेक्का लगाएको चार बर्ष वितिसक्दा पनि पुन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
आर्थिक बर्ष ०७३।०७४ सम्ममा निर्माण कार्य सक्ने गरी जिम्मा लिएको पुल ०७४।७५ सम्म पनि काममा शून्यमै छ । स्थानीय सरकारले ठेकेदारलाई पटकपटक ताकेता गरेपछि ०७६।०७७ सम्ममा पुल सक्ने प्रतिबद्धताका लागि पुन काम शुरु गरेको थियो ।
सुस्ताबाट नेपालका अन्य भू–भाग आउंन नारायणी नदीमा डुंगा नै तर्नु पर्ने बाध्यता कि त भारतबाट आउनु पर्ने बाध्यता रहेका सुस्ताबासीलाई बर्षाको समयमा भारतले सीमामा कडाई गरिदिने र नारायणी नदीमा पानीको सहत बढ्दा डुंगा चलाउन पनि समस्या भएर आवतजावतमै समस्या हुने गर्दछ । जसले गर्दा पनि उनीहरुले नेपाली बजारमा र नेपालको अन्य भू–भागसँग सहजै जोडिनका लागि नारायणी नदीमा पुल निर्माणको माग गरेका हुन् ।
पश्चिम नवलपरासीको पक्लिहवाबाट सुस्ता गाउंपालिकाको सुस्ता जोड्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि केभी एण्डे पशुपति कन्सट्रक्सन कम्पनीले जिम्मा लिएको हो । पछि उक्त पुल बनाउने जिम्मा त्रिशुली एण्ड साहारा जे भीले लिएका हो ।अहिलेसम्म जमिनमुनीको पाइलिङ्ग गर्ने काम पनि नसकेको पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार ठेकेदारले अहिले ३ वटा पिल्लरको पाइलिङ्ग (जमिन मुनिको काम) सकेको छ । जब कि पुलको डिजाइनमा १४ वटा भन्दा बढी पिल्लर राख्नु पर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ्गले झलुङ्गे पुल निर्माण हुन सके सुस्ताबासीका आधा समस्या हल हुन्छ । सधै भारतीय बाटो प्रयोग गरेर बजार आउजाउ गर्नु पर्दैन भने सुस्तामा उत्पादिन उखु, भेली जस्ता सामग्रीरु सजिलै नेपाली बजारसम्म ल्याउन सकिन्छ ।
कम्पनीले निर्माण सम्झौता गरे लगतै केही निर्माण सामग्रीह? फलामे रड, फलामे पाता, जेनेरेटर, जेसिभी, फलामका जाली लगायतका सामग्रीह? छाडेर गएको छ भने बेला बेलामा प्राविधिक आएर ड्रिलिङ्ग गरेर जमिन मुनिको सतहको अवस्था परीक्षण गर्ने गरेका छन् तथापि अहिलेसम्म जम्मा ३ वटाको मात्र सकिएको छ ।
नवलपरासीको सुस्तामा २२ करोड ८० लाखको लागतमा पुल निर्माणका लागि उसले ठेक्का लिएको थियो ।उक्त झलुङ्गे पुल१ हजार पांच सय ७१ मिटर लम्बाई र १ दशमबल ७ मिटर चौडाईको झलुङ्गे पुल हुने छ ।
यो बर्ष पुल निर्माणको केही काम भएको भए पनि ठेकेदार पक्ष पुन एक महिनादेखि काममा नफर्किएको पाण्डेले बताए । ठेकेदार पक्षले निर्माण स्थलमा विद्युतको सहज आपूर्ति गरिदिन माग गरेको बताए । पाण्डेले भने – अलि धेरै निर्माण सामग्री झारेर काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाए, मैले विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने थिए । केही सामग्री झारेकै छैन । कसरी विश्वास गरेर उनीहरुले भनेको मान्ने ?
फोटो छ पुल ।